Walgahiin Paarlaamaan Itoophiyaa dhimmaa Finfinnee irratti yaame eega jalqabamee booda addaan cite. - NuuralHudaa
Walgahiin Paarlaamaan Itoophiyaa dhimmaa Finfinnee irratti yaame eega jalqabamee booda addaan cite.
Miseensoonni Mana marii bakka bu’oota ummataa yaa’ii dhimma “faaydaa addaa” Oromiyaan Finfinnee irraa argattu ilaalchisee, ummataa mari’achiisuuf har’a waamamee ture osoo hin osoo hin gaggeeffamin hafe.
Miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa bakka bu’an, dhimmaa Faaydaa addaa Finfinnee irraa Oromiyaan argachuu qabdu, ummanni baldhinaan irratti mari’achuu qaba. Dhimma Finfinnee irratti haasawuun duratti ammoo naannoon Oromiyaa nagaya argachuu qaba, kanaafuu dhimmi kun yeroo biraatti akka dabru jechuun mormii dhageessisan.
Haaluma kanaan walgahiin jalqabamee ture addaan cituun, yeroo biraatti kan dabre tahuu gabaasni arganne ni mul’isa.